Kukangaki ngosuku kufanele ngiyikhiphe inja yami? | Izinja Umhlaba
Kukangaki ngosuku kufanele ngiyikhiphe inja yami?
Lapho sinquma ukuletha inja ezohlala nathi, kubalulekile ukuthi kusukela kumzuzu wokuqala siqale ukuyifundisa ukuthi akufanele zikhulule indlu yonke. Abanye bakhetha ukumfundisa ukuthi banendawo endlini ebekelwe leyo njongo, kanti abanye bakhetha ukumfundisa ukulinda nokuzikhulula ngaphandle.
Kungalesi sizathu-ke namuhla sizokhuluma kancane ngakho kufanele sikhiphe kaningi kangakanani inja yethu ukuzikhulula. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukusuka kuyashiyana ngeminyaka, ngoba ngeke kuhlale kuyinani elifanayo. Ekuqaleni lapho izinja zingumdlwane, ngokuqinisekile njenganoma iyiphi ingane noma ingane encane kuzodinga ukuhamba izikhathi eziningi kunenja endala.
1 Yiba nenja enempilo ngokudla nangemidlalo
2 Ukuhamba nenja kuletha izinzuzo eziningi kuye
2.1 Ungazivocavoca ngendlela efanele
2.2 Ixhumana nezinye izinja
2.3 Kwenza izidingo zakho
2.4 Yazi imvelo yakho
3 Amathiphu lapho uhamba nenja ngokweminyaka yayo
3.1 Imidlwane yokuhamba
3.2 Ukuhamba inja yabantu abadala
3.3 Ukuhamba inja esikhulile
4 Kukangaki ngosuku kufanele ngihambise inja ngokobukhulu bayo
4.1 Inja enkulu yokuzala
4.2 Inja enkulu
4.3 Inja ephakathi nendawo
4.4 Inja encane noma ithoyizi
5 Kuthiwani uma ngimkhipha kaningi kunokujwayelekile ngeminyaka yakhe?
6 Amathiphu wokuhamba nenja yakho
Yiba nenja enempilo ngokudla nangemidlalo
Ukudla okunomsoco ezinjeni kubanika amandla, ukukhula okuhle, ijazi elinempilo namazinyo futhi ubavikele ekuhlushweni yizifo ezahlukahlukene.
Ngakho-ke ukuba nenja enempilo kwenza umehluko phakathi kwenja ejabule naleyo engekho. Kepha impilo akuyona yonke into, ngoba inja idinga ukuphuma ngaphandle ukuze ixhumane nemvelo yayo, nabanye abantu ngisho nangezinye izilwane, ngakho-ke uma ungenayo indawo eningi endaweni, kuyadingeka ukuthi uhambe uhambe nenja ukuze ikwazi ukuphazamiseka, ukuzivocavoca nokuzikhulula.
Ukuhamba nenja kuletha izinzuzo eziningi kuye
Ungazivocavoca ngendlela efanele
Ezikhaleni ezincane, inja ayikwazi ukugijima noma ukuhamba ngokukhululeka ngokwanele, ngakho-ke uhambisa imilenze yakho kaningi, okuholela ekunciphiseni kwemisipha kokuqala
Ixhumana nezinye izinja
Zonke izinhlobo zomhlaba zidinga ukuxhumana nezinhlobo ezifanayo, ngoba njengoba nje sidinga ukuxhumana nabanye abantu, izinja zidinga ukuhlangana nezinye izinja. Lokhu kuyivumela ukuthi idlale ngokukhululeka, izalane futhi ingesabi izinhlobo zayo.
Ngingayenza kanjani inja yami ibe nobungane?
Kwenza izidingo zakho
Kunabantu abaningi abasungula izindawo ezithile emakhaya abo lapho izinja zabo zingaya endlini yangasese. Kepha kukhona abanye abangenayo indawo eyanele yokuqoka indlu yokugezela yezinja, ngakho-ke bakhetha ukufundisa izinja zabo ukuze bazikhulule kuphela lapho sebethathwe uhambo.
Lokhu gwema iphunga elibi ngaphakathi endlini, ikakhulukazi ezindaweni ezincane. Vele, lokhu akusho ukuthi kufanele ushiye imfucuza yenja yakho emgwaqweni lapho uyikhipha.
Thatha isikhwama ongaqoqa ngaso imfucuza bese kamuva usulahla.
Yazi imvelo yakho
Ngokuvamile, izinja zamukelwa zisencane, ngakho-ke bajwayela imvelo yabo yemvelo ekubeni yifulethi noma indlu abahlala kuyo.
Uma inja ingahanjwa njalo, izobona umgwaqo njengendawo eyingozi yokwesaba. Esikhundleni salokho, kufanele uhambe nenja yakho ukuze uyenze ifune ukwazi okomhlaba omzungezile, eshiya eceleni amahloni nokwesaba okukuzungezile.
Kunjalo, ukuhamba nenja yakho kuletha izinzuzo eziningi kuye Futhi ukwenze kaningi, kepha umbuzo abanikazi bezinja abaningi abazibuza wona ukuthi kufanele bahambe kaningi kangakanani izinja zabo. Vele, ayikho ipharamitha ethize okufanele ilandelwe lapho uhamba nenja, ngoba ayikho inja efanayo nenye, ngakho-ke imvamisa yokuhamba izokwehluka kuye kokunye.
Kodwa-ke, kukhona ezinye izincomo nezinto okufanele uzicabangele lapho uhamba nenja. Ngakho-ke, kule ndatshana, sizokunikeza okunye amathiphu ongahamba ngayo nenja yakho ngokweminyaka yayo.
Amathiphu lapho uhamba nenja ngokweminyaka yayo
Iningi labantu lithatha inja, noma ngabe iyimidlwane. Imidlwane ifunda ngawo wonke umuntu obazungezile, ngakho-ke thatha isikhathi sokuba umdlwane wakho omusha umfundise lokho okudingeka akwazi.
Into yokuqala okufanele uyenze qiniseka ukuthi umdlwane wakho uthola yonke imigomo yakhe, ngoba kungabulala ukuphuma ngaphandle kokuvikelwa emzimbeni wakho. Uma usugonyiwe, usukulungele ukuphuma phandle ufunde inqubo yakho entsha.
Lapho uyikhipha ukuze uhambe kumele umfundise ukuthi kufanele ayogeza. Vele, kuyinto ejwayelekile ukuthi angachama ngaphakathi endlini, njengoba esafunda, kepha kancane kancane nangokubekezela, uzofunda ukuthi indawo yokuya endlini yangasese isemgwaqweni. Okufanele ukwenze cabanga isikhathi esithatha umdlwane wakho ukuya endlini yangasese, ngakho-ke ungakulindela lokhu, bese ngaleyo ndlela ujwayele ukuya endlini yangasese emgwaqweni.
Imidlwane iyasebenza kakhulu, ngakho-ke sizofuna ukuhamba kaningi ukushisa amandla. Ungahamba umdlwane wakho izikhathi ezingaphezu kwezingu-4 ngosuku, ukuze ufunde kabanzi ngomgwaqo. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba njengoba inja ikhula, uma ingazi indawo ezungeze yona ngokwanele, izobona umgwaqo njengendawo ethakaselwayo futhi izozama ukubaleka, noma ibuye ibone njengendawo eyingozi futhi ingafuni ukuya kuyo phuma.
Ukuhamba inja yabantu abadala
Lapho inja isikhulile futhi ifunde indlela yayo yokuhamba, manje kufanele uqinisekise ukuthi unempilo ephelele. Khumbula ukuthi akuzona zonke izinja ezichama ngemvamisa efanayo, njengoba kungezona zonke ezingakwazi ukubekezelela ukuhamba okulinganayo.
Ngakho-ke, uma inja yakho ichama, ngokwesibonelo amahlandla ama-4 ngosuku, awukwazi ukuhamba naye amahlandla ama-4 ekuseni bese ulinda kuze kube ngakusasa angafuni ukuya endlini yangasese, ngoba izinja zidinga ukuya endlini yokugezela umzuzu abazizwa ngawo, ngoba bangaya endlini yangasese ngaphakathi endlini noma efulethini.
Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sokuhamba nenja yakho. Kunconywa ukuthi uhambe inja endala okungenani imizuzu engama-90 ngosuku bese uthatha isinqumo sokuthi usabalalisa kanjani.
Vele, okunconywe kakhulu yimizuzu engama-30 ekuseni, emini nantambama noma kusihlwa.
Ukuhamba inja esikhulile
Izinja esezikhulile unesidingo esifanayo sokuhamba njengezinja ezincane. Kodwa-ke, kungenzeka bangabe besaba namandla afanayo nezinja ezincane, kepha basadinga ukujabulisa, ukusebenzisana, nokuxhumana nendawo ebazungezile.
Mhlawumbe, uma unenja esikhulile udinga ukuyihamba izikhathi eziningi, ngezikhathi ezimfushane kuphela, kusukela izinja ezindala zigwinya uketshezi oluningi, ngakho-ke bazizwa benesidingo sokuya endlini yangasese.
Khumbula ukuthi babuthakathaka, ngakho-ke akufanele uvumele ezinye izinja ukuthi zizame ukudlala nazo ngezindlela ezinzima. Qaphela ngezinsuku ezishisa kakhulu, ngoba inja yakho inganciphisa amanzi emzimbeni ngokushesha kunezinye.
Kudlulise kaningi, kepha isikhathi esincane, ngoba izinja ezindala zifuna ukuphumula okuningi ezindaweni ezinokuthula. Noma kunjalo, ukuhamba njalo kuzokwamukelwa ngabo futhi ekugcineni bazokubonga.
Kukangaki ngosuku kufanele ngihambise inja ngokobukhulu bayo
Izindlela ezintathu? Isihlanu? Isishiyagalombili? Ishumi nambili? Futhi isikhathi eside kangakanani? Futhi kunendaba yini uhlobo lwenja? Impela yonke leyo mibuzo ozibuze yona kaningi. Futhi uma usesha i-Intanethi, uzobona ukuthi kunezimpendulo eziningi zazo zonke.
Asikwazi ukukutshela ngempela ukuthi kufanele uhambe nenja yakho kangaki. Ngoba yinja yakho. Umazi kangcono ukudlula noma ngubani uyazi ukuthi ungahlala isikhathi esingakanani endlini yakho, izidingo zakho, nokuthi udinga ukuzivocavoca kangakanani. Kunezinja ezincane ezizalanayo ezethuka kakhulu uma ungazikhiphi izikhathi eziningana ngosuku; kanti abanye, ngakolunye uhlangothi, abafuni ukuphuma endlini isikhathi esingaphezu kwemizuzu emihlanu. Bese kuba khona izinja ezidinga ukuzivocavoca umzimba kunezinye, njengezinhlobo ezinkulu noma ezinkulu, futhi ukuphuma kwazo kuthatha isikhathi eside.
Ngakho-ke, imininingwane esizokushiya ngezansi ayiyona ngqo, kufanele uyivumelanise nesilwane sakho, kokubili ngenxa yobudala baso futhi nangenxa yokuthi sinjani. Kepha kungakusiza ukuthi ubone isilinganiso sohlobo ngalunye lwenja.
Ngakho-ke, uma une:
Inja enkulu yokuzala
Lezi zinja zidinga ukuzivocavoca, ikakhulukazi ukuze zingakhuluphali kakhulu. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi uyikhiphe ubuncane bemizuzu engama-80 ngosuku. Ungazisabalalisa noma ngabe ufuna kanjani, kepha okungenani yilezo zikhathi ezingekho ekhaya. Uma kungaphezulu, futhi kungagijima, kunyakaze, kudlale ... kangcono kakhulu.
Uma kwenzeka, ngaphakathi kwekhaya lakho, awukwazi nokunyakaza, bese ngincoma ukuthi ukhuphule leyo mizuzu ngosuku. Udinga ukushisa amandla futhi izinja ezinkulukazi zinokuningi!
Izinja eziphakathi kwama-22 no-40-50 kilos, ezimbalwa ezinhle Imizuzu engu-120 ngosuku Bazokubonga kakhulu. Yebo, sibeke imizuzu eminingi kunale eyedlule, kepha ngoba sibheka ukuthi ubukhulu obukhulu abukho phansi, kepha buningi endlini enomhlaba wokuhambahamba.
Kepha uma kungenjalo, manje usungafaka lesi sibalo nakubo. Le mizuzu ingasatshalaliswa usuku lonke: isibonelo, ekuseni ikhiphe imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuya emsebenzini), emini imizuzu engama-30, kuthi ebusuku ibe ngu-80 noma 90. Kulungile ukuyikhipha kancane ngosuku inqobo nje uma ungaphumi kakhulu ekulawuleni.
Inja ephakathi nendawo
Lezi mhlawumbe yizinja ezijwayelekile ezindlini, futhi azidingi ukuphuma kakhulu, nge cishe imizuzu engama-60 ngosuku banokuningi okwanele. Lokho kulingana nokuthi, uma kukhona okuphumayo okuthathu, ukwenze imizuzu engama-20 ngakunye cishe.
Inja encane noma ithoyizi
Izinhlobo ezincane kufanele ziphume nazo. Abanikazi abaningi bakhetha ukungathandi, ikakhulukazi amathoyizi ukuze bangangcolisi noma babambe izifo, kepha ukuhamba kuyadingeka kakhulu. Futhi lokhu kufanele kube kusuka cishe imizuzu engama-50-60 nsuku zonke. Futhi enye inothi, ukuthi lokhu kuhamba kunabo ngempela behamba, bengabanjwanga ngezingalo, ngoba kumayelana nokuzivocavoca umzimba, ukuhamba nokuxhumana nezinye izilwane.
Isincomo sethu ukuthi, ngalezi zinhlobo, ukuhamba kufushane, ngoba bakhathala kakhulu kunezinye izinhlobo, ngakho-ke kufanele ukukhiphe kaningi kaningi (kane kuya kahlanu).
Kuthiwani uma ngimkhipha kaningi kunokujwayelekile ngeminyaka yakhe?
Kukhona futhi icala lapho ulikhipha kakhulu kunokujwayelekile. Eqinisweni, yisimo esenzekile, futhi njengoba bancoma ukuthi badle yonke into, kepha ngaphandle kokudlula ngokweqile, kwenzeka okufanayo lapha.
Uma uhlala ukhipha inja, into yokuqala oyibangelayo ukuthi isilwane sakho asikwazi ukulawula. Khumbula ukuthi izinja yizilwane ezijwayele. Bayazi isikhathi ovuka ngaso, bayayazi inqubo yakho. Futhi bayazivumelanisa nayo.
Kepha kuthiwani uma uyishintsha ngokuzumayo? Kuthiwani uma lokho kuthonya izikhathi lapho bephuma baye emgwaqweni? Yebo, kuza iphuzu lapho bengazi ukuthi benzeni. Zibekiwe uvalo, ukucasuka, ukukhathazeka ... ngoba abazi ngempela ukuthi uzobakhipha yini, uma kuyisikhathi sokuhamba, uma ungasakhiphi ...
Akuthinti kuphela isimo sabo sengqondo, kodwa futhi nokwenyama, ngoba lapho uhambahamba izikhathi eziningi, kwenza inja ikujwayele futhi lapho ingakwenzi, ungathola isimanga njengalokho ekwenzayo izidingo zakho endlini.
Kungakho kubalulekile ukuthi isikhathi esinqunyelwe silandelwe njalo lapho kubekwa izinkambo. Kuyindlela isilwane esingalawula ngayo ama-sphincters aso.
Amathiphu wokuhamba nenja yakho
Lapho uphuma nenja yakho, kufanele uqale ube nezitsha ezithile, ngoba ezinye izidingo zingahlala zivela kuzo, njengoba zenza nakithi.
Isibonelo, kufanele uphume namanziNjengoba izinja, ikakhulukazi ezincane, zishisa amandla amaningi, ngakho-ke zivame ukwehlisa amanzi emzimbeni ngokushesha. Letha izikhwama zepulasitiki, uma kwenzeka inja yakho yenza ibhizinisi layo emgwaqweni, ngoba kuzofanele uzithathe uzilahle kude.
Ungakhohlwa ukuletha amathoyizi, ngoba izinja zizohlala zifuna ukuzijabulisa. Okuthile okulula njengenduku noma ibhola kungaguqula ukuhamba okulula kokunye okuphuma phambili kokudlala kwenja yakho.
Khumbula ukuthi inja yakho nayo ikhathele, ngakho-ke akufanele uthathe uhambo olude kakhulu. Ngokufanayo, izinja ziyaphuma ziyoshaywa umoya ukuze zikunake futhi uzijabulise. Ungabali njengokuhamba e-cafe bese ubopha ibhande lenja yakho emlenzeni wesihlalo.
Uma ungakajwayeli ukuthi inja yakho ihlukane neleash, ungayenzi, ikakhulukazi uma incane kakhulu, ngoba izinja ezincane ziyadlala futhi zifuna ukwaziFuthi bafunda okufanele kwenziwe nokungafanele kwenziwe, ngakho-ke uma uyiyeka icishe iketanga, kungenzeka ibaleke noma ibaleke.
Ukubaluleka kokuhamba nenja ku-leash
Lapho uhamba, zama ukungaphoqeleli inja yakho ukuzihlanganisa nesinye isilwane noma umuntu angamfuni, ngoba lokhu kungadala ukungavikeleki futhi kungakwenza ube nolaka ngokumelene nelinye iqembu.
Njalo gcina inja yakho isondele lapho uwela umgwaqo, ukugwema noma yiluphi uhlobo lwengozi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Kukangaki ngosuku kufanele ngiyikhiphe inja yami?
Ingakanani inja eneminyaka engu-1 ubudala engayibamba? Ngingene ngaphakathi ngaze ngedwa ngathatha isinqumo sokwenza ngaphandle. Kepha kwesinye isikhathi ihlala amahora afinyelela kwangu-8 noma ngaphezulu. Ngiyesaba ukuthi izokuzwisa ubuhlungu. Noma ukujwayele? Ngiyabonga.
Uma engahlanyi uzohlanya akhiphe inja amahlandla ayi-12 ngosuku noma okungenani uzobe ecabanga ngophisi wenja usuku lonke ... yisiphi iseluleko esiwubuwula nesingelona iqiniso
UMaria del Mar kusho
Sawubona inja yami ecubungulayo ingumuntu omncane oshaya kancane, manje unezinyanga eziyishumi nanye ubudala futhi akakwazi ukumelana nokuvakasha okuthathu akuqale emasontweni ambalwa edlule, futhi kuye kwadingeka sibuye futhi ekuphumeni okune, kujwayelekile ukuthi Angikwazi ukubamba futhi kufanele ngibekezele futhi ngiphikelele ekuphumeni okuthathu?
Phendula kumaria del mar
Esikhundleni salokho okushiwo ngabantu, kwangisiza. Angazi ukuthi kungani bethi kuyanengeka, ngeke kube yindatshana emnandi kakhulu, ikhuluma ngokuthi ngiqonde kangaki ukuthi amakati ayashwabana, ngiqonde ukuthi, bafuna intombazane ikhulume ngama roses esihlokweni sayo! ngikhonze kakhulu, Ngiyabonga? !!!
Yebo, yomibili le ndatshana kanye namazwana engizowathatha njengeseluleko ngoba umyeni wami unginike inja enenyanga eyodwa kuphela ubudala, nginenyanga yokuba naye, okungukuthi, unezinyanga ezimbili kuphela ubudala kodwa bengingakaze ngibhekane nakho eyodwa, futhi uma ngiyivuma ngifisa ukwenza ubuthi obuningi benziwa njengezikhathi eziyi-10 ngosuku noma ngaphezulu, kusukela kusasa ngizozijwayeza ukuzikhiphela emgwaqweni okungenani ama-3 ngosuku, i-12 ihaba .. nisale kahle kubo bonke 😉
Kubonakala kimi kungumbhalo omuhle ... ngoba kunengqondo ukukhipha inja injana izikhathi eziningana ngosuku ukuze ungamniki ithuba lokukwenza futhi lapho azi ukuthi uzobambelela kuze kube sekuhambeni kwakhe okulandelayo. .. Kumele futhi sikhumbule ukuthi isilwane sasekhaya kungumthwalo omkhulu futhi sidinga isikhathi uma ufuna ukusifundisa futhi uma kungenjalo ... ukuhlanza njalo endlini. Sanibonani?
Hahaha cha ngoba iyangethusa, ngiyikhipha ihora elilodwa kuphela ngosuku bese ngiyadlala ngizikhulule, inja yami ineminyaka emi-2 ubudala, mhlawumbe kuya ngeminyaka.
Awunanhlonipho futhi awunanhlonipho. Ukuthi ucabanga ukuthi umbhali akanembile akukuniki ilungelo lokumthuka, uma okuhlangenwe nakho kwakho kwehlukile kwehlukile futhi kuphelele lapho, akukho okwenzekayo. Akakudelelanga, uzame kuphela ukwabelana ngolwazi lwakhe nabanye abantu, okuyinto encomekayo kakhulu. Futhi masingakhulumi ngezinto ezingcolile ozibhalile ... ngabe lokho kuzoba ngcono kunendatshana oyifundile? Nginesiqiniseko sokuthi akekho kini ongathanda ukuhlangana nabantu abakhulume nawe kanjalo. Ubudinga imfundo encane nokwazi ukuthi ungaba kanjani.
Akukabi kangako noma akunampandla kusho
Kepha uzohamba kanjani inja amahlandla ayi-12? Ngempela, lokhu kushiseka ngokweqile kwezilwane kudonsa ngaphezu koyedwa wenu, yize ngibheka iphrofayli yemoto akumangazi.
Phendula kuLutho noma akunampandla
Lokho kuphawula okungathandeki, kwabantu abafunde kabi kakhulu ... ngamafuphi, abantu abaphansi nabangenanhlonipho bakuyo yonke indawo ... ukuphawula ngalokhu kungcono ukungaphawuli nakancane. Ukuhlonipha kwami ​​umbhali.
Ngiyavuma, nginegolide elinezinyanga ezimbili ubudala, futhi uma ufuna ukumjwayela ukwenza izidingo zakhe ngaphandle kwendlu kufanele umkhiphe okungenani njalo emahoreni amabili, lapho elele, lapho edla nasebusuku kufanele uvuke futhi ukumkhipha, isinye sakho ngeke sihlale isikhathi esingaphezu kwamahora amathathu ngaphandle kokukhipha, uma unqena ukusisusa bese udedela indlu yonke noma uthole ikati, noma ungabi nesilwane
Nginomdlwane onezinyanga ezi-6 engiwuthathe eneminyaka engu-4 kanti amasonto okuqala wamkhipha amahlandla ayi-12 noma ngaphezulu ukuze ajwayele ukuya endlini yangasese ngaphandle kanti ezimbili zalezo zindawo zazingehora eli-1, Njengamanje uyikhiphile amahlandla ama-6 futhi ngiyaqhubeka nokugcina ukuhamba okude, ngithatha inja yami ngesilinganiso sokuthi lesi sikhathi ngesakhe, ukujabulela nokudlala, noma ngabe shits noma achame okwesibili sisuka ekhaya sihlala isikhashana ukujabulela. Lokho ukuyikhipha ukukhipha yonke into nekhaya kubukeka kuwubuqaba, ukuba nenja kuthwala umthwalo wemfanelo kanti labo kini abebedelela akufanele babe nezilwane, ngoba ngokusobala niyikhathalela kakhulu inkaba yenu ukudlula umhlaba wonke.
Izinja ezihluphekayo nabantu abathanda ukuthi baziveza kanjani kanjalo! kungcono babengenazo izinja. Uma ethi kufanele uzikhiphe amahlandla ayi-12, akasho ukuhamba ngezinyawo okude, angaba phambi kwendlu kuphela futhi kumayelana nemidlwane! kuze kube yilapho umdlwane ufunda ukuhlobanisa ukuthi kufanele enze kuphela isidingo ngaphandle kwendlu, lokho kungukuqonda okujwayelekile kepha abaqondi futhi kungcono ukuphatha kabi lowo obanikeza iseluleko. lokho kubizwa ngobuwula. lungisa noma ululeke isiwula futhi sizokuphatha kabi, kusho ibhayibheli elifanayo
Ngilithandile lelo nothi. Abantu abacabanga ukuthi lo wesifazane ophambene owenza lezi zeluleko kungenxa yokuthi abanayo imizwa, njengoba ngifunde kokunye ukuphawula - uma kuzoba njalo, kungcono ukuthi abanazo izinja.
Noma yini? Uya kangaki endlini yangasese? Inja ingumuntu ophilayo njengathi okufanele aye endlini yangasese.
Ngiyakuthanda okuthunyelwe kwakho! Ngiyabonga ngalokho ngicabangela ezinye izinto ???
Kuhle kakhulu futhi ngiyabonga ngale ndatshana. Ngicabanga ukuthi noma ngubani okhononda kulindeleke ukuthi afunde ukuthi kwanele ukususa isilwane kanye ngosuku. Embhalweni kukhishwa ukuthi bangabantu abaphilayo abanesistimu efanayo yokuxosha uketshezi njengabantu. Nawe ungakubekezelela kepha akunconywa futhi akumnandi kakhulu. Kufanele uvumelane nobudala besilwane. Ngiyabonga! Kungisize kakhulu
Kuyamangalisa ukuthi abantu bafunda kanjani ngaphandle kokufunda ukuqonda futhi ngaphezulu kwalokho bacabanga ngendlela engenampilo ngalokho abacabanga ukuthi bayakuqonda. Umbhali akukho lapho esihlokweni athi kufanele ukhiphe inja amahlandla ayi-12. Ukhulume ngegama elithi "ishumi nambili" kuphela embuzweni.
Abantu, funda, uhlaziye futhi uhumushe ngaphambi kokuphawula nokugxeka.
Ngaphandle kwalokho, bengicabanga ukuthi yindatshana enhle kakhulu.
Yini ipipette futhi yenzelwe ini?
Kungani inja yami ihlanza futhi inehudo